အိမ်တွင်းနှင့်အလုပ်ခွင်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီရန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်း ၆ ခု - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B6B စျေးကွက်သတင်း
ဧပြီလ 16, 2021 ဧပြီလ 13, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ ဘ‌‌လော့ခ်, အသားပေးသတင်းများ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဂြိုဟ်အားကူညီရန်အလုပ်တွင်လုပ်နိုင်သောအရာများသည်လျှပ်စစ်ကားများမှတစ်ဆင့်ခရီးသွားခြင်း၊ တစ်ပတ်ရစ်ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါစွမ်းအင်သုံးစွဲသောပစ္စည်းများကိုပိတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည့်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်အဖိုးတန်ပြီးကူညီရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့အတွက်လွယ်ကူစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤအနေရာလေးကိုအကြံပေးချက်များလာဘယ်မှာပါပဲ!
သင်ဟာအိမ်မှာဖြစ်စေအလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချိန်အများစုကိုသင်ဘယ်နေရာမှာပဲသုံးနေဖြစ်စေ၊ ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သေးငယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ လူတိုင်းကသေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ရင်ငါတို့မှာကြီးမားတဲ့ရလဒ်တွေရလိမ့်မယ်.
အောက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုဖတ်ရှုပါ။ အလုပ်ခွင်၌ဖြစ်စေ၊ အိမ်ပတ်ပတ်လည်ဖြစ်စေပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမည်မျှပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ
1. Greener ထုတ်ကုန်ကိုသုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုများစွာသက်ရောက်နိုင်သည်။ အချို့သောထုတ်ကုန်များသည်အထိခိုက်မခံရန်သို့မဟုတ် hypoallergenic ဖြစ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်းရလဒ်ကောင်းများရရှိရန်အခြားသူများသည်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်အရေပြားအခြေအနေများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြagနာများပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းသို့မဟုတ်ရေပေးဝေမှုနှင့်သမုဒ္ဒရာအတွင်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ စိမ်းလန်းသောရွေးချယ်စရာများသို့ပြောင်းခြင်းထိုကဲ့သို့သောသဘာဝ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုသောသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအပိုအဆိပ်များ (သို့) microbeads (ပလပ်စတစ်အမှုန်များ) ကိုမသုံးပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့သည်သင်၏ပုံစံကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ အနံ့ဆိုးစေခြင်းသို့မဟုတ်အပြင်ဘက်တွင်ထားခြင်းတို့ကြောင့်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ချေ။ ပိုသောခေတ်မီဂေဟစနစ်ကိုသတိထားသောလူနေမှုပုံစံနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ဆွေးဘင်ဒီဇိုင်းများပြောင်းလဲလာသည်။
သင်၏အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုမြေကြီးကိုများစွာကြွယ်ဝစေရန်သို့မဟုတ်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချစွာစွန့်ပစ်ရန်အသုံးပြုသည့်နည်းဖြင့်သူတို့ကအလုပ်လုပ်ကြသည်။ မြေဖို့ရန်သွားသောအစားအစာများသည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုတိုးစေရုံသာမကကြီးမားသောထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆွေးမြေ့ခြင်းသည်အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၃။ Leftovers ကိုသုံးပါ
အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်အိမ်ထောင်စုအတွင်းရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏အကြီးဆုံးသောနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကျန်ရှိသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သင်၏အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပြုသဘောဆောင်စွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ယခုရှိပါသည် အရသာချက်ပြုတ်နည်းများများစွာသောအကွာအဝေး အစားအစာလတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုပိုမိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဘုံကျန်ရှိသောအရံပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။
သင်ဤနည်းကိုအီလက်ထရောနစ်နှင့်အ ၀ တ်အထည်၊ ပြန်လည်အသုံးချခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများအားလည်း၎င်းကိုလွှင့်ပစ်ရုံထက်မကတိုးချဲ့နိုင်သည်။ သင်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်၊ အွန်လိုင်းတွင်ရောင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ထည်သစ်ကိုအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဖန်တီးမှုရယူပါ။
နေ့စဉ်အသွားအပြန်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိညစ်ညမ်းမှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောထုတ်လွှတ်မှုများကိုသိသိသာသာဖြစ်စေနိုင်သည်။ အစိုးရများစွာသည်လျှပ်စစ်ကားများအသုံးပြုရန်မက်လုံးပေးခြင်း၊ စက်ဘီးလမ်းကြောင်းအသစ်များတည်ဆောက်ခြင်းစသည့်အခြားနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမဲ့မင်းသူတို့ကိုစောင့်စရာမလိုဘူး။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသွားအပြန်အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုသင်၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိစေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသလား။ လမ်းလျှောက်ရန်သို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းသည်တစ်ပတ်လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်နိုင်သည်။
လျှပ်စစ်ကားသို့ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်ခရီးသွားခြင်းရွေးချယ်ခြင်းများကိုလည်းသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး၏ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုပင်အားပေးအားမြှောက်ပြုနေကြသည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းခရီးသွားလူ ဦး ရေကိုများစွာလျော့ကျစေသည့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပိုမိုတာ ၀ န်ယူမှုလည်းဖြစ်လာသည်။
2. တစ်ပတ်ရစ်ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ပါ
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နေပါကသင့်တွင်အဓိကအသုံးပြုသည့်အဓိကပစ္စည်းများ၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အသုံးအဆောင်များကို ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်စရာရှိနိုင်သည်။ ဤသည်ဖို့မြေသို့သွားသောပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုလျှော့ချသည်။ အဖြစ်မကြာခဏအသစ်စက်စက်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာလာမယ့်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ပို၍ စိမ်းလန်းသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်မလုပ်ပါကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သူဌေးကိုဖြစ်နိုင်လျှင်ဒုတိယအနေဖြင့် ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောစက္ကူသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်လျှော့ချသည့်ပစ္စည်းများသို့ပြောင်းရန်သင်အားပေးနိုင်သည်။ အသေးစားပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်သာလိုအပ်သည့်နေရာတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစနစ် (သို့) ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အမှိုက်ပုံးများကိုပင်စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်မှာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအခန်းထဲမှထွက်သွားပါကမလိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို သုံး၍ မီးသီးများ၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်မီးများနှင့်အခြားအရာများကိုပိတ်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်သေချာပါစေ။
အများပိုင်သတင်း ပတ်ဝန်းကျင် အစိမ်းရောင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး